China Yaskawa Ukuphatha iRobot Motoman-Gp25 mveliso kunye nabenzi | Jiesheng
Ukuphathwa kweYaskawa ngeRobot Motoman-Gp25
Inkqubo ye- Yaskawa IMOTOMAN-GP25 I-robot yokuphatha iinjongo ngokubanzi, kunye nemisebenzi ecebileyo kunye nezinto eziphambili, ziyakwazi ukuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi abaninzi, ezifana nokubamba, ukufaka, ukudibanisa, ukugaya kunye nokucubungula iindawo ezininzi.
Inkqubo ye- Yaskawa IMOTOMAN-GP25 iinjongo jikelele ukuphatha irobhothi, Ngemisebenzi etyebileyo kunye nezinto eziphambili, inokuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi abaninzi, ezinje ngokubamba, ukushumeka, ukuhlanganisa, ukugaya, kunye nokulungisa iindawo ezininzi.
IMOTOMAN-GP25 kwindalo iphela ukuphatha irobhothi Inomthwalo omkhulu we-25Kg kunye noluhlu oluphezulu lwe-1730mm. Unowona mthwalo uphezulu, isantya kunye namandla esihlahla esivunyelweyo kwiklasi yaso. Iyakwazi ukufikelela kumthamo wokudlulisa ophezulu, ukhetho olufanelekileyo lokuqhubekeka kwebhetshi enkulu kunye nokupakisha. Uyilo lokunciphisa uphazamiseko luyayivumela ukuba isebenzisane nezinye iirobhothi ngokusondeleyo kwaye ngaphandle kwemiqobo, kwaye inokusetyenziselwa ukuphatha, ukukhetha / ukupakisha, ukugoba, ukudibanisa / ukupakisha, njl.
Indawo yesihlahla IMOTOMAN-GP25 irobhothi yamkela umgangatho we-IP67, kwaye ulwakhiwo oluchaseneyo nokungaphazanyiswa lunokukhokelwa luhambelane nesiseko sendibaniselwano. Phucula imveliso. Inani leentambo phakathi kwerobhothi kunye nekhabhathi yolawulo liyancitshiswa ukusuka kwimbini ukuya kwenye, ethi icuthe kakhulu ixesha lokutshintshwa kwentambo rhoqo, iphucula ukugcinwa kwayo kwaye ibonelele ngezixhobo ezilula.
IMOTOMAN-GP25 isebenzisa ukwakheka kwengalo kumngxunya, enokubandakanya iintambo zesenzi kunye nemibhobho yegesi kuyo ukunciphisa uphazamiseko phakathi kwengalo kunye nezixhobo zepheripherali, kwaye isantya sokudibanisa sonyuswe malunga ne-30% xa kuthelekiswa neemodeli ezikhoyo. Ixesha lokujikeleza liyancitshiswa kwaye liphuculwe. Ukusebenza kwemveliso kudala ixabiso eliphezulu kwishishini.
Egqithileyo Ukuphathwa kweRobot Gp20hl eyiYaskawa
Okulandelayo: I-YASKAWA ephethe ngobuchule i-robot MOTOMAN-GP35L
Ukuphathwa kweMizi-mveliso yeRobhothi, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Iinkqubo zokuphatha izixhobo zeRobotic, Ukuphathwa kweRobothi yeAxis, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphatha ingalo yeRobot,